Blockchain Adoption Archives-Funda ukurhweba
tag: Ukwamkelwa kukaBlockchain
I-China Firm yentsimbi iFezekisa ileta yokuTshintshiselwano ngetyala yokuqala yeGlobe liphela ngeBlockchain
Ukuhlaziywa: 15 May 2020
Inkampani yase China yentsimbi, iBaosteel, isebenzise iteknoloji ye-blockchain ukugqibezela ileta yokuthenga ngetyala (LC). UBaosteel wenze i-renminbi LC ngokusebenzisana ne-Rio Tinto, inkampani yemigodi yase-Australia.
Intlawulo sisihlandlo sokuqala semvumelwano yokuwela umda, kusetyenziswa i-renminbi, kwenziwa ngaphandle kwephepha. Intengiselwano yayiqhutywa yinkampani yezezimali yamazwe aphesheya yaseBritane iStandard Chartered Bank (SCB), ecwangcisa ukusebenzisa itekhnoloji ye-blockchain ngokubanzi.
I-SCB isebenzise iContour, iqonga lezemali elirhweba ngokuvulekileyo eliqhutywa yi-R3's Corda enterprise blockchain ukuqhuba nokwenza isivumelwano. Ethetha ngokukhula, i-SCB eyiNtloko yezoRhwebo uSamuel Matthew Matthew uvakalise uchulumanco egameni lebhanki.
"Siyavuya ukuba sidlale indima ebalulekileyo njenge-LC yedijithali ekhupha ibhanki kurhwebo olukhulu oluphawula i-RMB yamanye amazwe ye-LC phakathi kweebhanki ezimbini nge-blockchain."
Ukuqhubela phambili kuzise iindaba ezinkulu kwikamva lezemali kunye nokwamkelwa kwe-blockchain, ngakumbi kwintengiselwano yamanye amazwe. Abanye bayakrokra, nangona kunjalo, ukuba le yinxalenye yesicwangciso sikarhulumente waseTshayina sokulwa nolawulo oluthile i-US eyenze ngedola.
I-China ngoku ivavanya imali yedijithali kwibhanki ephambili. Ukuvavanywa eSuzhou City kwaqala ngo-Epreli kusetyenziswa izikhuthazi zothutho. Abasebenzi kwiarhente ezimbalwa kwiSithili iXiangcheng eSuzhou bekulindeleke ukuba baqale ukuqokelela isiqingatha senkuthazo yezothutho ye-CBDC.
tags I-Baosteel, Ukwamkelwa kukaBlockchain, Corda, Ileta yetyala (LC), Ibhanki eChartered Standard (SCB)
I-DigiByte (DGB) kwiiNkqubo ezifuna ukukhulisa indalo
Ngomhla we-4 kaMeyi 2020, iDigiByte (DGB), yenye yezona ndawo ziphambili zivulekileyo kwaye zisasazwe ngokupheleleyo kuthungelwano lwetekhnoloji ye-ledger (DLT), iveze ukuba ikhangela iinkqubo ze-blockchain ezinokuzisa ixabiso kumalinge ezayo e-ecosphere. Iqela likholelwa ukuba amanyathelo ambalwa eza nomvuzo omkhulu kanti abanye baya kubaxhasa abaxhasi ababandakanyekayo ukuba bazi iDigiByte.
Idigibyte yenza inkqubela phambili ngokukhawuleza
Iqela le-DigiByte, elalisekele i-DigiByte Foundation ngaphambili ngoFebruwari 2020, ngoku lamkela iinkqubo ezongezelelweyo ze-blockchain ukuba zithathe inxaxheba kwiqonga labo kodwa baphinde bagqibe amanyathelo aya kuthi aphucule imeko-bume yendawo yabo.
UDigiByte uthumele i-tweet:
"IDigibyte ikhangela iinkqubo ezinokuxhasa eli nyathelo lizayo eliya kuthi lenyuse ngokubonakalayo ukufunyanwa kwabathengi kunye noLwazi ngeDigiByte blockchain."
Njengoko kucacisiwe kulawulo lwayo lweGitHub, abaphathi beenkqubo baya kufumana inkuthazo enkulu ngamanyathelo ambalwa ngelixa abanye bexhasa abantu ababandakanyekayo ukuba bazi iqonga le-blockchain leDigiByte.
Uluhlu lwezinto esingathanda ukuzenza kwiDigiByte, ezimbalwa kunye / ngaphandle kwemivuzo, njl njl. Ngaba ufuna ukongeza? Ukubuza imibuzo, vula isicelo sokutsala ukutshintsha into kunye / okanye isikhalazo seGitHub, utshilo uDigiByte.
Ngokukodwa, i-DigiByte ichonge ukwamkelwa kwamanyathelo angama-28 ekufuneka abenzi beenkqubo ababandakanyekayo bawenze. Onke la manyathelo ahlelwe ngokwamacandelo amathathu aphambili: "izinto ezincinci zokwenza, izinto ezinkulu zokwenza, kunye namava enkqubo."
Ukwenza lula ngakumbi
Kwinqanaba leZinto eziNcinci zokuSebenza, abadwelisi benkqubo kuya kufuneka baguqule i-DigiByte's basic wallet app, bakhe iividiyo zeqonga le-DigiByte, benze iqonga loXwebhu loXwebhu, lenze ukuba abathengi be-DigiByte basebenzise i-DigiExplorer, kunye ne-Android Burn Assets, kunye nabanye abaninzi.
Iinkqubo ezikulungeleyo ukuthatha inxaxheba kudidi lwezinto ezinkulu kulindeleke ukuba zamkele iProgPow kwiDigiByte, zibonelele ngenkxaso yenethiwekhi kwimigodi yeGPU, ibandakanye inethiwekhi yoMbane, Sebenzisa iRandomX, kunye neBridge Schnorr sigs, kunye namanye amanyathelo.
Kwiindaba ezifanayo, uJared Tate, umphathi we-DigiByte, wadibana nabasemagunyeni base-US eWashington DC ngaphambili ngoJanuwari 2020 ukuphonononga ukwamkelwa okubanzi kwe-blockchain.
tags Ukwamkelwa kukaBlockchain, Cryptocurrency, IDigiByte (DGB)
Iibhanki ezinkulu zase China sele zisebenzisa iBlockchain
Ukuhlaziywa: 22 April 2020
Zombini iibhanki zikarhulumente eTshayina, kunye nezinye zezona zinto zinamandla kwezobuchwephesha eTshayina, ziceba ukumilisela ukusetyenziswa kwebhloko blockchain. Iphepha elimhlophe lenye yeebhanki ezinkulu zase China zibonisa ukuba ibhlokhi iyasetyenziswa kwicandelo leenkonzo zezezimali zokuhlala, ukuthengiswa kwempahla, ukugcinwa kweebhanki, kunye neminye imimandla. Iifemu zeenkonzo zezezimali ezingama-72 zibhalisile ukubonelela ngeenkonzo ezisekwe kwi-blockchain kuRhulumente.
Ngaphezulu kweefemu zeenkonzo zezezimali ezingama-70 e-China zizalisekisa izicelo ze-blockchain ezisekwe kwezemali, kubandakanya zonke iibhanki zikarhulumente kunye neenkampani ezinkulu zobuchwephesha. Enye yezona bhanki zikarhulumente zikhulu, ngokwe-Industrial and Commercial Bank yaseChina (ICBC).
I-ICBC yatsho kwiphepha elimhlophe kutshanje ukuba iibhanki zase China zifuna ukusebenzisa iibhlokhi kumacandelo anje ngezemali zorhwebo, ukulawulwa kwempahla, intlawulo, ii-invoice zedijithali, kunye nezinye izicelo.
AmaTshayina aQhelekileyo eThishini aQeqesha aMkela iBlockchain
Iifemu ezine zobuchwephesha eTshayina- iBaidu, Alibaba, Tencent, kunye neJD- nazo ziyakha kwizicelo zazo ezisekwe kwi-blockchain yeenkonzo zezemali. Uninzi lwezi blockchains ziya kusekelwa kwimvume, njengoko iphepha lisitsho.
Ezinye izicelo ezahlukeneyo zikhankanyiwe kolu xwebhu nazo. Umzekelo, i-ICBC iyonke iphuhlise uthungelwano lokurhweba phakathi kwemida phakathi kwe China neYurophu, kusetyenziswa itekhnoloji yeeleja ezisasazwayo kunye nezivumelwano ezifanelekileyo zokuqinisekisa nokulungelelanisa ulwazi lokuhambisa oluthengiswa ngamashishini, iindawo zokugcina iimpahla, amasiko, iibhanki kunye neearhente zikarhulumente.
Ngokwamaphepha amhlophe, iibhanki zase China kunye namashishini asebenzisa iibhlokhi ukuphatha imali, ukubeka esweni imixokelelwane yokubonelela, ukukhupha ukhuseleko, kunye nokulandela amanqaku okunyaniseka kwabaxumi.
Malunga ne-420 blockchains firms -17% yezo zikwezemali. Amakhulu amabini anamashumi amabini eenkonzo zemali ezijolise kwi-blockchain- babhaliswa kuLawulo lweCyberspace yase China ekupheleni kwe-2019, i-ICBC ithi.
tags Ukwamkelwa kukaBlockchain, Itekhnoloji yeBlockchain, iTshayina
Isikhokelo esilawulayo sithintela i-Bitcoin Ukwamkelwa komntwana wase-Australia
Ukuhlaziywa: 1 Matshi 2020
I-Australia ibisebenza kakhulu kwi-cryptocurrency ukusukela ekuqaleni kwe-2020. Nangona kunjalo ilizwe elingaphantsi komhlaba lisandula ukulandela indlela yolawulo kwi-cryptocurrensets. UAdrian Przelozny ovela kwi-Independent Reserve, e-Australia, uphawule ngale nto kudliwanondlebe lwakutsha nje.
Uye wathi obona buthathaka bukhulu e-Australia xa kuthelekiswa namazwe afana ne-Singapore, enemithetho ecacileyo kwi-asethi yedijithali, baninzi kakhulu abalawuli e-Australia. Ngaphandle koko, uqaphele ukuba i-Australia ihlala ibonwa njengomzekelo kwihlabathi liphela malunga nendlela imigaqo ye-AML ekufuneka isebenze ngayo kule ndawo.
Wongeze ngelithi abanye abalawuli e-Australia, njenge Khomishini yoKhuseleko kunye nezoTyalo-mali yase-Australia [i-ASIC] kunye ne-Reserve Bank yase-Australia [RBA], baneenkcazo ezahlukeneyo zemigaqo. Oku, waphawula, kudala ukudideka okuninzi. Ecacisa ngakumbi, wathi:
Oko iZiko lase-Australia lokuNgxelo nokuHlalutya [i-AUSTRAC] likubeka njengemali yedijithali akunakuhlelwa njengemali yedijithali ngeenjongo zerhafu, enazo zonke ezinye iziphumo. Ngelixa kukho umlawuli omnye eSingapore, iGunya lezeMali laseSingapore [MAS], kwaye kubonakala ngathi lenza yonke into; ulungelelwaniso kukho okungcono kakhulu.
Imida yase-Australia ye-Cryptocurrency
Oku kuye kwaba ngumqobo ophambili e-Australia ekwamkeleni iiasethi zedijithali.
Ezinye izizathu, uqaphele, zibandakanya inkxalabo yolawulo malunga nokuncitshiswa komngcipheko kunye nokukhuselwa kwabathengi ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba babonakale ngathi bayawuphikisa umngcipheko.
Incoko ikwaguqukele kwesona sihloko sixoxwe kakhulu - iziqingatha zesithathu zeBitcoin. Ucacisile into yokwahlulahlula kwisiqingatha-ukukhula ngakumbi kulo nyaka.
tags Ostreliya, Ukwamkelwa kukaBlockchain, Ummiselo weDijithali yemali
I-Sec-Gen yeZizwe eziManyeneyo yiyo yonke iBlockchain Technology Adoption
Unobhala Jikelele weZizwe eziManyeneyo, u-António Guterres uvakalise umnqweno wakhe wokuba umbutho wamkele ubuchwepheshe be-blockchain ekusebenzeni kwawo. Iminqweno kaGuterres yathunyelwa ngokupapashwa yiForbes eyayidlala ngomhla wamashumi amabini anesibhozo kuDisemba.
U-Sec-gen uthe uyakholelwa ngamandla kwi-blockchain njengoko ilungisa yonke inkqubo esetyenziswa kuyo, kwaye i-UN kufuneka yamkele itekhnoloji ye-blockchain ukuba iza kusebenza ngokugqibeleleyo kule minyaka yedijithali.
Njengoko irekhodi libonisa, eli ayilixesha lokuqala uGuterres ukuba athethe kakhulu ngokusetyenziswa kwe-blockchain. Kwi-2018, waseka "iprojekthi yokusebenzisana kwidijithali" kwaye wabeka iteknoloji ye-blockchain njengenye ye-ajenda yayo ecacileyo.
Ngo-Septemba ka-2018, iSec-gen ibonise indlela ukuzithemba kumaziko esizwe njenge-UN kuye kwancipha ngokuthe chu kwiminyaka edlulileyo. Ucacisile ukuba itekhnoloji, ngakumbi i-blockchain, inamandla okulungisa oku kwehla.
Nangona kunjalo, ukwabonakalise ukungakhathaleli kwakhe ukusetyenziswa gwenxa kwemali engeyiyo ngabadlali abangalunganga, esithi abadlali bobugebenga basebenzisa i-web emnyama kunye nokungaziwa kweenkqubo zokuhlawula i-crypto kubantu bezithuthi kunye neempahla ezingekho mthethweni kwimida.
Ngapha koko, kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, iNtloko ye-UN yamachiza kunye nesebe lolwaphulo-mthetho u-Neil Wals ulumkisile ukuba ii-cryptocurrensets zenza umlo wokulwa nokuchithwa kwemali kunganzima nangakumbi.
Iiprojekthi ezininzi ezinxulumene neBlockchain yi-UN
Emva kokusekwa kweprojekthi yentsebenziswano yedijithali kaGuterres, ukwamkelwa kwe-blockchain kwi-UN kungqinele ukunyuka okukhulu.
Kwangoko kulenyanga, i-UN isebenzisane ne-blockchain esekwe kwinkonzo yezemali ukuzisa isixhobo se-blockchain ukunceda ukuthintela ukuxhaphaza ngokungekho mthethweni kwabasebenzi abavela kwamanye amazwe eHong Kong.
Umbutho uqhuba nezifundo ukwenza isisombululo se-blockchain sokuhlala kwabantu abahlala ezidolophini njenge-Afghanistan.
Kwasekuqaleni konyaka, iarhente yezohambo ngenqwelomoya ye-UN ikwakhankanyile ukuba ibhloko ye-blockchain izakudlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yeenqwelomoya.
tags Ukwamkelwa kukaBlockchain, Itekhnoloji yeBlockchain, Isizwe esimanyeneyo
I-blockchain ixelwe ukuba yenze i-headwind ezinzulu e-China
Ukuhlaziywa: 8 Disemba 2019
Indawo yophando esekwe e-Asia, Forkast Insight, ikhuphe uphononongo olunzulu lwendlela itekhnoloji enxulumene ne-blockchain ifumana ukuhlanganiswa e-China.
Indawo yophando yapapasha iziphumo zophando zokuqala nge-5 kaDisemba, eyayiqulathe ukuqonda ngendlela abasemagunyeni baseTshayina kunye nemibutho eyamkela ngayo ibhloko. Uphononongo lubonise ukuba itekhnoloji enxulumene ne-blockchain yakhula ngokukhawuleza kwaye yayiqokelele uluhlu lwezinto ezisebenzayo zehlabathi.
Inkampani ibandakanye uphando olunzulu oluvela kubathandi be-blockchain baseTshayina, abaphengululi, kunye nabalawuli ukuveza ukuba uqoqosho lweli luqhuba njani ngolu hlobo lutsha.
Uphengululo lubonisa indlela ibhloko ye-blockchain ebonwa ngayo kwilizwe xa kuthelekiswa namanye amazwe ehlabathi, indlela iinkampani ezisebenzisa ngayo itekhnoloji kunye nendlela ezibuchaphazela ngayo ubomi babathengi bayo, indlela i-China ehamba phambili ngayo kukhuphiswano lobunini be-blockchain, kunye nendlela ibhanki ephezulu I-China ikulungele ukukhupha imali yayo yedijithali kwithuba elincinci.
China Kwiphambili yeBlockchain Innovations
Kwaxelwa ngamanye amaxesha ngo-Novemba ukuba ukukhula kwe-blockchain yase-China kuya kubhala i-66% ngonyaka ukusuka kwi-2018 ukuya kwi-2023 kwaye iya kuvelisa ngaphezulu kwe- $ 2 yezigidigidi ngo-2023.
Ukulandela iifowuni zamva nje zika-Mongameli wase-China welizwe zokukhuthaza ukwamkelwa kwetekhnoloji ye-blockchain, ngoku kuyacaca ukuba i-China ikhokele xa kufikwa kwimicimbi ye-blockchain, ibeka ilizwe phambili e-United States.
U-Xi uchaze inani lamacandelo afuna ukungenelela kwe-blockchain njengokhathalelo lwempilo, imibutho yesisa, unyanzeliso lomthetho kunye neninzi labanye, eqhubeka egxininisa izibonelelo zokwamkelwa okwenziwa lilizwe.
Ukuhamba okukhulu kweBlockchain eTshayina
Isizwe saseAsia siziqinisile iinjongo zabo zokwamkela itekhnoloji ye-blockchain, kunye nolawulo olubonisa ukubaluleka koku okutsha kuqoqosho lwedijithali. Ukwamkelwa okuphindaphindiweyo kwe-blockchain ngabasemagunyeni baseTshayina luphawu olulungileyo lokuba ulawulo lujolise ekuphunyezweni kwetekhnoloji kulo lonke ilizwe.
Ngokuchukumisayo, umkhosi waseTshayina ukwathathela ingqalelo ukusebenzisa itekhnoloji enxulumene ne-blockchain ukulungisa ezinye iinkqubo kwicandelo njengokunika abasebenzi kunye nokulawula ulwazi lwabucala.
tags Ukwamkelwa kukaBlockchain, iTshayina
Isisombululo kuMmiselo we-Crypto yeeBhanki eziMkhulu nguRhulumente waseFrance
Ukuhlaziywa: 18 October 2019
USekela-Rhuluneli waseBanque De France, uDenis Beau wenze amagqabantshintshi ngomgaqo osetyenziswa ziibhanki ezingoovimba.
U-Beau uvakalise inkxalabo yakhe kwinkomfa ye-OMFIF eyayibanjelwe eLondon ngomhla we-16 kweyeDwarha, apho wathetha ngendima ekwakufuneka idlalwe zii-cryptocurrensets kuthungelwano lwangoku lokuhlawula imali emhlabeni.
Ukudala imigaqo efanelekileyo ye-Cryptocurrency
U-Beau uchaze ukuba iinkqubo eziqhelekileyo ezisekwe ebhankini zinokuhlangabezana notshintsho olukhulu ngenxa yenkqubela phambili yetekhnoloji efana ne-blockchain kunye ne-DLTs. Uqhubeke nokucacisa ukuba uphuhliso lweeasethi ezintsha zedijithali ezinokuthi zibeke imali yesiqhelo. Uye wongeza ukuba ii-Stablecoins zesikali esikhulu ziya kuba ngumceli mngeni omkhulu ekubalulekeni kwenkqubo ekhoyo yezemali kwaye zinokubeka esichengeni uzinzo lwemali kwezi nkqubo.
Ucebise ukuba iibhanki eziphambili ziqwalasele iindlela ezi-3 ezinokubakho ekusombululeni le micimbi:
I-1- Kuya kufuneka bayilahle impahla ye-cryptocurrency, engenakulindeleka ukoyikisa izoyikiso ezinokubakho.
2- Kuya kufuneka banqande yonke imali yedijithali.
I-3- Olona khetho lukhethiweyo ngokuka-Beau, iya kuba kukudala imithetho ye-imali yedatha kwihlabathi liphela.
Isithintelo esijongana neBlockchain Adoption
Ukungabikho komgaqo omiselweyo kunye nomgaqo olandelwayo kwicandelo le-cryptocurrency kunye ne-blockchain lityholwa njengeyona ngxaki iphambili kubalawuli kunye nabadlali be-crypto. Inkampani eyaziwayo yeenkonzo zobungcali, uDeloitte wakhankanya isibhengezo kwi-2018, ukuba ukungabikho komgaqo olandelwayo bekungumqobo ophambili wokwamkelwa kwetekhnoloji ye-blockchain.
URiccardo Spagni, umphuhlisi osisiseko we-Monero, ucebise ukuba imigaqo-nkqubo engalinganiyo yolawulo inokukhokelela kufuduko lweetalente ezinxulumene ne-cryptocurrency iye kwimimandla efanelekileyo. Abenzi bomgaqo-nkqubo kumazwe ahlukeneyo bazabalazela ukufikelela kwimozulu efanelekileyo ye-cryptocurrency ukutsala iitalente kunye notyalo mali.
Ngelinye ixesha kulo nyaka, Ummeli wase-US U-Warren Davidson ubuyisele i-Token Taxonomy Act, owawungumthetho owawuza kubona ukuba ii-cryptocurrensets zingafakwanga kuluhlu oluphantsi kwemithetho yezokhuseleko yase-US.
tags Ukwamkelwa kukaBlockchain, Ummiselo we-Crypto